Onyankopɔn Ahenni​—Nea Enti a Ɛho Hia Yesu
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Maltese Maya Mazatec (Huautla) Mongolian Moore Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Zande Zulu
Onyankopɔn Ahenni—Nea Enti a Ɛho Hia Yesu
Bere a Yesu reyɛ asɛnka adwuma wɔ asase so no, nneɛma pii na ɔkaa ho asɛm. Ebi ne sɛnea n’akyidifo bɛbɔ mpae, sɛnea wɔbɛyɛ Onyankopɔn apɛde, ne sɛnea wɔbɛnya anigye a ɛdi mu. (Mateo 6:5-13; Marko 12:17; Luka 11:28) Nanso ade baako wɔ hɔ a na ɛda ne koma so paa, na ɔkaa ho asɛm kyɛn biribi foforo biara. Ɛno ne Onyankopɔn Ahenni.—Luka 6:45.
Ɔwɛn-Aban yi mu asɛm a ɛdi kan no ma yɛhui sɛ Yesu asetena nyinaa mu no, ɔkaa “asɛm no, na ɔpaee mu kaa Onyankopɔn ahenni ho asɛmpa.” (Luka 8:1) Ɔnantew twaa akwansin pii faa Israel, na ɔkaa Onyankopɔn Ahenni no ho asɛm kyerɛɛ nkurɔfo. Wɔakyerɛw Yesu asɛnka adwuma no ho asɛm wɔ Nsɛmpa nnan no mu. Wohwɛ mu a, wobɛhu sɛ Nsɛmpa no ka Ahenni no ho asɛm bɛboro mpɛn 100, na emu dodow no ara yɛ Yesu anom nsɛm. Nanso yɛreka paa a, Onyankopɔn Ahenni ho asɛm a Yesu kae no, nea ɛnni Nsɛmpa no mu na ɛdɔɔso.—Yohane 21:25.
Bere a Yesu wɔ asase so no, adɛn nti na na Ahenni no ho hia no saa? Ade baako ne sɛ, na Yesu nim sɛ ɔno na Onyankopɔn ayi no sɛ Ahenni no so Hene. (Yesaia 9:6; Luka 22:28-30) Nanso ɛnyɛ tumi ne anuonyam a Yesu bɛnya na na ɛhia no. (Mateo 11:29; Marko 10:17, 18) Ɛnyɛ nea ɔbɛnya nti na ɔbɔɔ Ahenni no ho dawuru. Yesu dɔ ne soro Agya ne n’akyidifo a wɔyɛ Onyankopɔn apɛde. Sɛ Ahenni no ba a, ɛbɛyɛ nneɛma bi ama wɔn. Ɛno nti na Onyankopɔn Ahenni no ho ahia Yesu abɛsi nnɛ. *
NEA AHENNI NO BƐYƐ AMA YESU SORO AGYA
Yesu dɔ ne soro Agya paa. (Mmebusɛm 8:30; Yohane 14:31) Suban pa te sɛ ɔdɔ, ayamhyehye, ne atɛntrenee a n’Agya wɔ no, Yesu ani gye ho paa. (Deuteronomium 32:4; Yesaia 49:15; 1 Yohane 4:8) Enti wohwɛ mu a, ade a ɔkyi koraa ne sɛ ɔbɛte sɛ nkurɔfo reka n’Agya ho atosɛm. Atosɛm no bi ne sɛ, brɛ a yɛrebrɛ nyinaa, ɛmfa Onyankopɔn ho na mmom ɔpɛ sɛ yɛhu amane. Ne nyinaa ka ho bi nti na na Yesu ani abere reka “ahenni no ho asɛmpa” no. Ná ɔnim sɛ ɛrenkyɛ, saa Ahenni no bɛtew n’Agya din ho. (Mateo 4:23; 6:9, 10) Dɛn na Ahenni no bɛyɛ de atew edin no ho?
Yehowa nam Ahenni no so bɛyɛ nneɛma akɛse bi a ɛbɛsesa nnipa asetena. Nnipa a wɔyɛ n’apɛde no, “ɔbɛpopa wɔn aniwam nusu nyinaa.” Nneɛma a ɛde saa nusu no ba no, Yehowa bɛyi afi hɔ. Bible ka sɛ: “Owu nni hɔ bio, na awerɛhow ne osu ne yaw nso nni hɔ bio.” (Adiyisɛm 21:3, 4) Onyankopɔn nam n’Ahenni no so bɛyi nnipa amanehunu nyinaa afi hɔ. *
Enti ɛnyɛ nwonwa sɛ na Yesu ho pere no sɛ ɔbɛma nkurɔfo ate Ahenni no ho asɛm! Ná ɔnim sɛ Ahenni no bɛma nkurɔfo ahu sɛ n’Agya wɔ tumi kɛse, na ɔwɔ ayamhyehye nso. (Yakobo 5:11) Ná Yesu nim nso sɛ, Ahenni no bɛma nnipa atreneefo a ɔdɔ wɔn no ho atɔ wɔn.
NEA AHENNI NO BƐYƐ AMA ATRENEEFO
Yesu ne n’Agya tenaa soro bere tenteenten ansa na ɔreba asase so. Agya no nam Yesu so na ɛbɔɔ biribiara. Ebi ne ɔsoro nsoromma akuwakuw huhaa ne emu nsoromma a ɛnni ano, ɛne yɛn asase fɛfɛ yi ne emu mmoa nyinaa. (Kolosefo 1:15, 16) Nanso nneɛma a wɔnam Yesu so bɔe nyinaa, “nnipa mma ho nsɛm na na ɛda [ne] koma so.”—Mmebusɛm 8:31.
Wohwɛ Yesu som adwuma a ɔyɛe no a, wobɛhu sɛ nea ɔyɛe nyinaa kyerɛe sɛ ɔdɔ nnipa. Ne som adwuma no ahyɛase pɛɛ no, ɔkaa sɛ wɔsomaa no baa asase so sɛ ɔmmɛka “asɛmpa nkyerɛ ahiafo.” (Luka 4:18) Nanso, ɛnyɛ Yesu ano kɛkɛ na ɔde boaa nnipa. Ɔde ne nneyɛe na ɛkyerɛe sɛ ɔdɔ nnipa. Bere bi, nnipakuw bi twa hyiae sɛ wɔrebɛtie Yesu. Ɔhuu wɔn no, “wɔyɛɛ no mmɔbɔ na ɔsaa wɔn mu ayarefo no yare.” (Mateo 14:14) Ɔbarima bi nso, na yare yayaayaw bi ayɛ no. Ɔkaa biribi kyerɛɛ Yesu a na ɛkyerɛ sɛ ɔgye di sɛ Yesu pɛ nko ara a, ɔbɛtumi asa no yare. Ɔdɔ nti, Yesu huu no mmɔbɔ ka kyerɛɛ no sɛ: “Mepɛ. Wo ho mfi.” Enti ɔsaa no yare. (Luka 5:12, 13) Bere a Yesu hui sɛ n’adamfo Maria resu ne nua Lasaro a wawu no, “osii apini,” “ne ho yeraw no,” na ‘osui.’ (Yohane 11:32-36) Afei Yesu yɛɛ biribi a obiara anna anso ho dae. Ɔnyanee Lasaro a wawu nnanan no baa nkwa mu bio!—Yohane 11:38-44.
Ná Yesu nim sɛ mmoa a ɔde maa nkurɔfo saa bere no rentena hɔ afebɔɔ. Ná ɔnim sɛ wɔn a ɔsaa wɔn yare no bɛsan ayare, na wɔn a ɔnyanee wɔn no nso bɛsan awu. Nanso, na Yesu nim sɛ Onyankopɔn Ahenni no ba a, ɛno de, ɛbɛtu saa haw no nyinaa ase korakora. Ɛno nti wanyɛ anwonwade kɛkɛ, na mmom ɔyeree ne ho “kaa ahenni no ho asɛmpa.” (Mateo 9:35) N’anwonwade no, na ɛyɛ nea Onyankopɔn Ahenni no bɛyɛ wɔ asase so nnansa yi ara no ho mpopoe. Ma yɛnhwɛ sɛnea Bible ka nea ɛbɛsi no ho asɛm.
Obiara renyare bio.
“Saa bere no anifuraefo ani bebue na asotifo aso ate asɛm. Ɛbere no mu na apakye behuruw sɛ ɔforote na mum tɛkrɛma de anigye abɔ ose.” Afei nso, “ɔmanfo no mu biara renka sɛ: ‘Meyare.’”—Yesaia 33:24; 35:5, 6.
Obiara renwu bio.
“Treneefo benya asase no adi, na wɔatena so daapem.”—Dwom 37:29.
“Ɔbɛmene owu akosi daa, na Awurade Tumfoɔ Yehowa bɛpopa obiara aniwam nusu.”—Yesaia 25:8.
Awufo bɛsɔre aba nkwa mu bio.
“Wɔn a wɔwɔ nkae ada mu nyinaa bɛte ne nne na wɔafi adi.”—Yohane 5:28, 29.
“[Nnipa] bɛsɔre afi awufo mu.”—Asomafo Nnwuma 24:15.
Obiara bɛnya baabi atena anya adwuma ayɛ.
“Wobesisi adan atena mu na wɔayeyɛ bobe nturo adi mu aba. Wɔrensi mma obi mmɛtena mu, na wɔrennua mma obi nni. . . . Wɔn a mapaw wɔn no bedi wɔn nsa ano adwuma amee.”—Yesaia 65:21, 22.
Obiara renko bio.
“Ɔma akodi gyae kosi asase ano.”—Dwom 46:9.
“Ɔman bi rentwe nkrante wɔ ɔman bi so, na wɔrensua akodi bio.”—Yesaia 2:4.
Ɔkɔm renne obiara bio.
“Asase bɛma ne nnɔbae; Onyankopɔn, yɛn Nyankopɔn, behyira yɛn.”—Dwom 67:6.
“Asase no so nnɔbae bɛdɔɔso; ebebu so akodu mmepɔw atifi.”—Dwom 72:16.
Obiara renni hia bio.
“Ɛnyɛ da biara na wɔrenkae ohiani.”—Dwom 9:18.
“Obegye ohiani a osu frɛ no, ne mmɔborɔni ne nea onni boafo nso. Ɔbrɛfo ne ohiani asɛm bɛyɛ no mmɔbɔ, na obegye ahiafo kra nkwa.”—Dwom 72:12, 13.
Wohwɛ nea Onyankopɔn Ahenni rebɛyɛ yi a, ɛdi sɛ na ɛho hia Yesu saa. Bere a na ɔwɔ asase so no, na n’ani gye ho sɛ ɔbɛka Onyankopɔn Ahenni no ho asɛm akyerɛ obiara biara, efisɛ na ɔnim sɛ Ahenni no na ɛbɛyi ɔhaw a yɛhyia no nnɛ nyinaa afi hɔ.
Nea Bible ka fa Ahenni no ho no, w’ani gye ho? W’ani gye ho a, ɛnde wobɛyɛ dɛn asua Ahenni no ho ade pii? Dɛn na woyɛ a, ɛbɛma woanya nhyira a ɛde bɛba no bi? Ɔwɛn-Aban yi mu asɛm a ɛdi hɔ no bɛkyerɛkyerɛ saa nsɛm no mu.
^ nky. 5 Nea enti a yɛreka sɛ Onyankopɔn Ahenni no ho ahia Yesu abɛsi nnɛ ne sɛ, seesei ɔwɔ soro. Ɔkɔɔ soro nso, biribiara kyerɛ sɛ Ahenni no da so ara hia no kɛse.—Luka 24:51.
^ nky. 8 Nea enti a Onyankopɔn ama kwan ma nnipa hu amane no, sɛ wopɛ ɛho nsɛm pii a, hwɛ nhoma a wɔato din Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? no ti 11. Yehowa Adansefo na wɔtintimii. Ɛsan wɔ Intanɛt so wɔ www.jw.org/tw.
Ɛyɛɛ dɛn na bɔne bae, na dɛn nti na Onyankopɔn ama akɔ so? So bere bi bɛba a amanehunu befi hɔ?